Kubadaha hilibka ee karootada iyo suugada zucchini | Cunnooyinka jikada
Kubadaha hilibka ee karootada iyo suugada zucchini
Maria vazquez | | Cunnooyinka Hilibka, Maraqa
Markuu qofku garan waayo waxa loo diyaariyo inuu cuno, kubbadaha hilibka ayaa had iyo jeer u muuqda bedel wanaagsan. Waxaan ka samayn karnaa hilibka cas, digaag, kalluun kalluun ama xitaa vegan, sida kuwa aan soo jeedin doono dhowr toddobaad gudahood, iyo kula raaci suugada noocyadeeda kala duwan. Kubbaddan hilibka ah ee ku jirta karootada iyo suugada zucchini ayaa ka mid ah xulashooyinka badan ee aan haysanno.
Waxaan u samaynay kubbadahaan hilibka qaab dhaqan oo leh a hilibka lo'da iyo hilibka doofaarka. Ku darista cajiinka basal yar, ukun iyo rooti caano lagu qooyey si ay uga sii macaan yihiin. Sida ku saabsan suugada, ma jeclaan karno wax badan! Fikradda ah in la isku daro karootada iyo zucchini ma noqon karto mid guuleysata.
Maraqa waa mid hodan ah Waxaan u xafidaneynaa qeyb ka mid ah inaan isku sameysano ukumo xidig leh hal habeen, waxba halkan laguma tuuro! Waa suugo midabkeedu aad u badan yahay, oo leh dhadhan badan oo aad u caafimaad qaba sida aad arki doonto marka aad aragto liiska waxyaabaha ay ka kooban tahay. Miyaad ku dhiiranaysaa inaad diyaariso saxankan? Nuqul liiska maaddooyinka oo aad dukaamaysi tagto!
Kubbadahaan hilibka leh oo leh karootada iyo suugada zucchini waa saxan weyn xilli kasta oo sannadka ah waxayna socon doonaan illaa seddex maalmood qaboojiyaha.
Kubbadaha hilibka (15 cutub):
480g. hilib shiidan (hilib lo'aad iyo hilib doofaar)
Onion basal cad
1 ukun L
Gabal gabal xabbad rooti ah oo caano lagu qooyey
10 g. Burcadka rootiga
Daqiiqda loogu talagalay dahaadhka
Saamaynta 3 ee saliid saytuun ah oo dheeri ah
2 dabacasaha waaweyn
100 g. yaanyo la shiilay
100 ml oo ah maraq khudradeed
Si fiican u jarjar basasha oo ku dar dhamaan waxyaabaha hilibka karsan (marka laga reebo burka) gacmaheena.
Ka dib, waxaan qaabeynaa kubbadaha hilibka oo waxaan ku dubnaa bur aad u fudud.
Marka xigta, waxaan ku kululeynaa 3 qaado oo saliid ah digsi waxaan ku shiilnaa kubadaha hilibka ilaa ay sifiican ugafeeyaan (waxay ku dhameysan doonaan maraqa). Maaddaama ay bunni yihiin, ka soo saar iyaga oo ku kaydso saxan.
Isla saliidaas (waa inaad ku dartaa qaado qaado ka badan) hada waxaan isku shiilineynaa basasha iyo karootada oo si fiican loo jarjaray 8 daqiiqo oo ah saldhiga suugada.
Ka dib, ku dar zucchini galay xabadaha yar yar, xilli oo kari ilaa afar daqiiqo oo dheeri ah.
Waqti ka dib, waxaan ku shubaynaa yaanyada iyo maraq, si fiican u walaaq si aad u wada kariso dhammaan daqiiqadaha 8-10.
Marka xigta, waanu jajabineynaa maraqa waxaanan dib ugu celinaynaa dabka, isaga oo dhigeyna kubbadaha hilibka maraqa. Karso shan daqiiqo daboolka daboolkiisa, kubbadaha hilibka kalabadh u sii mar karinta oo dabka dami.
Waxaan u adeegnaa kubbadaha hilibka ee karootada kulul iyo suugada zucchini oo waxaan ku keydineynaa haraaga weel hawo leh, oo u qaadnaa qaboojiyaha markay kululeeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Kubadaha hilibka ee karootada iyo suugada zucchini
Mussels ilaa vinaigrette
Baradho iyo salad basbaas